Wasaarrada warfaafinta oo soo saartay wax qabadka todobaadka ee dowladda Hiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Wasaarrada warfaafinta oo soo saartay wax qabadka todobaadka ee dowladda
Muqdisho : HN :– Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuhulow ayaa ka warbixiyey waxqabadka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; horumarka Howlgalka Badweynta Hindiya, Meelmarinta Xisaab Xirka 2013 & Heshiiska Difaaca ee Somalia iyo Talyaaniga, Dhowrista Xaquuqda Aadanaha, Dayactirka Garoomada Diyaaradaha ee Dalka, Horumarka Dekedda Muqdisho, Ka hortagga Gudniinka Fircooniga ah, Barnaamijka Heesaha Hirgalay, Horumarka Warbaahinta Dalka iyo horumarka Xasilinta Dalka.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Howlgalka Badweynta Hindiya ayaa yiri “Howlgalka Militariga ee Badweynta Hindiya ayaa u socda si wanaagsan oo ciidamadu ay si joogta ah goobo muhiim ah uga saarayaan kooxaha nabad-diidka ee Al-Shabaab. Ciidmada Qalabka Sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Gobolka Jubbada Hoose ayaa 4tii November deegaanno hor leh kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab, kaddib dagaal ka dhacay deegaanno agagaarka webiga Jubba. Mursal Geeddi oo ah sarkaalka hogaaminaya ciidamada ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, ayna kula wareegeen deegaanno ka tirsan goboka Jubba Hoose, kuwaasi oo ay ka midyihiin Wirkooy, Far-Waamo iyo deegaanno kale.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey meel marinta Xisaab Xirka Miisaaniyadda sanadka 2013 iyo Heshiiska Difaaca ee Somalia iyo Talyaaniga ayaa yiri “Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 3dii November ka dooday Xisaab Xirka Miisaaniyada 2013 iyo heshiiska dhanka difaaca oo ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga. Kulanka oo ahaa Kalfadhigii Shanaad kulankiisii todobaad oo uu shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa waxaa soo xaadiray 156 Mudane Dood dheer ka dib ayaa waxaa cod loo qaaday ugu horeyn heshiis ay wada gaareen Wasiirada Gaashandhigga Soomaaliya iyo Talyaaniga kaas oo ku saabsan Iskaashi dhanka Milatariga ah oo dhex mara labada Dowladood. 134 mudane ayaa ogolaatay, halka saddex diiday, isla markaasna ay shan ka aamustay. Baarlamaanka ayaa sharciyeeyey heshiiskaas oo u horseedi doona Wasaarada Gaashaandhiga inay kaalmo iyo taageero ka hesho Dowladda Talyaaniga oo lagu horumarinayo ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya. Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa waxaa ay sidoo kale cod u qadeen xisaab xirka miisaaniyad sanadeedkii 2013 kaas oo ay Mudanayaasha u soo gudbisay Wasaaradda Maaliyada. 135 mudane ayaa ogolaatay, afar diiday halka 15 mudane ay ka aamuseen sidaasi ayey xisaab xirka miisaaniyadda ee 2013 ay ku ansaxday.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey dhowrista Xaquuqda Aadanaha ayaa yiri “ Wasiirka Wasaaradda Haweenka & Arrimaha Xaquuqul Insaanka ayaa 3dii November Muqdisho ku qabatay seminar 5 maalin soconaya oo looga hadlayey sidii loo horumarin lahaa Xaquuqda Aadanaha oo loo joojin lahaa tacadiyada loo geystoo shaqsiga. Seminaarkan ayaa waxaa ka soo qeybgalay 70 qof oo ka kala socday maamulada gobollada dalka, ururada bulshada iyo howlwadeeno ka tirsan Wasaaradda Haweenka.Waxaana goob joog ahaa mas’uuliyiin ka socday AMISOM, iyo UNSOM. Arrimaha diirada lagu saarayey seminaarka ayaa waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ah iyo sidii loo joojin lahaa oo bulshada looga wacyigelin lahaa. Mas’uuliyiin u hadashay xafiisyada UNSOM iyo AMISOM ayaa si isku mid ah u tilmaamay in dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay horumar ka sameysay dhanka xaquuqda aadanaha, ayna ahmiyad gaar ah siinayaan ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah dumarka. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Xaquuqda Aadanaha ee Xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in Madaxda sare ee Qaranka ay ka go’atahay wax ka qabashada Xaquuqda Aadanaha, Wasaaradda haweenkana ay si gaar ah ugu xilsaarantahay xukuumadda, waxaan ahmiyad gaar ah siineynaa dadka la nool cudurka HIV/AIDS, kuwa dhimirka la’ ee dhibanaaasha ah, iyo joojinta gudniinka fircooniga ah iyo gaar ahaan dadka taagta daran sida haweenka, Naafada iyo carruurta.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey dayactirka Garoomada Diyraaradaha ee Dalka ayaa yiri “Wasaaradda Gaadiidka & Duulista Hawada ayaa Nairobi ku qabatay seminar labo cisho soconayey 4tii iyo 5tii November oo ujeedadiisu aheyd sidii daraasaadkii iyo qiimeyntii ay Wasaaraddu ka soo sameysey 80 garoon diyaaradeed ee dalka ay Hay’adaha Qaramada Midoobey u bilaabi lahaayeen dayactirka garoomadaas. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mas’uuliyiin ka socotay UNSOA iyo UNSOM iyo sidoo kale Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya. Wasiirka Wasaaraddda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Mudane Saciid Jaamac Cali Qorshel oo soo xiray shirka ayaa sheegay muhiimada dayactirka iyo horumarinta garoomada Diyaaradaha oo uu sheegey inay kaalin weyn ka qaadanayaan isu socodka bulshada isla markaasna ay Dowladdu ka heleyso Dakhli lagu fuliyo adeegyada bulshada. Ugu danbeyntii waxaa la sameeyey Guddi labada dhinac ah oo ka kooban 11 xubnood, kaasi oo ka howlgala sidii garoomadaas loo dayactiri lahaa. Sidoo kale waxaa la sameeyey Guddi ka kooban 4 oo 12ka November gaari doono Muqdisho si ay uga soo talo bixiyaan sidii garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho loogu xiri lahaa nalal si diyaaradaha ay habeenkii uga soo degi karaan.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Dekedda Muqdisho ayaa yiri “Shirkadda Al Bayrak ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa 4tii November ka warbixisey horumarka ay Dekedda ku tallaabsatay bishii la soo dhaafay, taasoo keentay in Dakhli fara badan uu Dowladda u soo xaroodo. Maareeyaha Guud ee Shirkadda Al-Bayrak Mustafa Levent Adali ayaa warbixintiisa ku sheegay in Dekadda ay ku talaabsatay horumar la taaban karo, waxaana uu intaa ku daray in lacag dhan 1.582,000 oo doolar (Hal milyan shan boqol sideetan iyo labo kun) ay ku wareejiyeen Maamulka Dekadda ee Dowladda Soomaaliya, ahna Dakhliga adeegyada ay sameyso Dekedda, tanoo ah horumar Dakhliga Dowladda lagu kordhinayo. Dakhligan kuma jiro kan ay Wasaaradda Maaliyada aruuriso ee canshuuraha badeecadaha. Warbixinta ayaa lagu xusay in horumarka dhaqaale ee dekaddu ku talaabsatay uu imaanayo, iyadoo qarashkii ganacsatadu ku bixin jireen dekadda aan kor loogu qaadin, ayna u sameyeen qiimo dhimis, tanoo keeneysa in dhaqaalaha dekadda ee dowladda uga soo xaroonaya uu si weyn u sii kordhi doono mustaqbalka dhaw, isla markaana ay dekadda mar dhaw noqon doonto mid casri ah.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey daahfurka dood cilmiyeedka looga hortagayo Gudniinka fircooniga ah ayaa yiri “Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa 5tii November daahfuray dood cilmiyeed 3 cisho ah oo looga hadlayo ka hortaga gudiniinka fircooniga ah oo ay Wasaaraddu u qabatay Culimaa’udiin Soomaaliyeed. Dood Cilmiyeedkaan oo looga hadlayey ka hortagga gudniinka Fircooniga ah ee hablaha Soomaaliyeed. Dood dheer iyo daraasad ka dib waxaa la isku raacay in si-wada-jir ah looga hortago gudniinka fircooniga ah, Culimadana ay sheegeen in falkaas uusan waafaqsaneyn diinta Islaamka, isla markaasna ay ka soo saarayaan Fadwo ku aadan arrinkan. Sheekh Yuusuf Cali Ceynte, Sheekh Cabdiqaadir Soomoow iyo Sheekh Cumar Xerow oo ka mid ahaa Culimada kulanka ka hadashay ayaa waxaa ay isku raaceen in Dowladda looga baahan yahay in arintan wax ka qabashadeeda xoogga saarto, iyadoo Culimada la kaashaneysa ayna diyaar u yihiin in ay muujiyaan sida aysan u wanaagsaneyn in dumarka lagu xadgudbo. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda ayaa sidoo kale goob joog ka ahaa kulanka looga hadlayo kahortagga gudniinka fircooniga ah. Ra’iisul Wasaare ku-xigeen ahna Wasiirka Awqaafta iyo Diinta Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa Culimada ka codsaday in ay qaataan doorkooda ku aadan ka wacyi galinta bulshada gudniinka Fircooniga ah, isla markaana ay dadka u sheegaan waxa Diinta Islaamku ka qabto falka nuucaas ah. Waxaan rabnaa in gebi ahaanba la joojiyo xadgudubyada dumarka, gaar ahaan gudniinka fircooniga ah.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlay barnaamijka Heesaha Hirgalay ayaa yiri “ 1dii November waxaan Muqdisho ku qabanay barnaamijka Heesha Hirgalay oo ay afar dhalinyaro ah ku tartameen soona bandhigeen heeso oo guddi ka kooban seddex qof ay qiimeynayeen codadkooda, miraha heesha, muusiga iyo sida ay u soo tabinayeen heeshaa. Kooxda Hobalada Waaberi ayaa maaweelinayey ka soo qeybgalayaasha isla markaasna dhiiri gelinayey dhalinyarada tartameysey. Guddiga qiimeynayey ayaa ahaa fannaanniin hore oo kala ahaa Shimali Ahmed Shimali, Abdirisak Gedi Akhiro iyo Mohamed Abukar Angazi. Afarta Dhalinyaro ee tartanka Heesaha Hirgalay ka qeybqaadatay ayaa kala ahaa Maxamed Axmed Shareeco, Umi Sharif Ahmed oo aheyd gabartii ugu horreysey, Aweys Mohamed Said, iyo Sadik Sharif Mohamud. Heesaha Hirgalay waa barnaamij sumcad iyo taariikh weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed oo fannaan caan ah ayaa barnaamijkaas ku soo baxay. Ujeedada ayaa ah sidii loo horumarin lahaa fanka iyo suugaanta Soomaaliya. Ugu danbeyntii guddiga ayaa go’aamiyey in Maxamed Axmed Shareeco uu galay kaalinta koowaad oo uu helay 90%, halka Umi ay gashay kaalinta labaad, saadaqna uu galay kaalinta 3aad iyo Aweys oo galay kaalinta 4aad. Barnaamijkan ayaa ah mid bil walba si joogta ah loo qaban doono.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Horumarka Warbaahinta Dalka ayaa yiri “5tii iyo 6dii November waxaan ka qeybgalay seminar ay Dowladda Mareykanka u qabatay saraakiisha warbaahinta ee AMISOM oo lagu qabtay Djibouti. Khudbad aan goobta seminarka ka jeediyey ayaan uga warbixiyey horumarka warbaahinta dalka iyo sida ay wasaaradu horseed uga tahay isku xirka iyo hagaajinta xiriirka hay’adaha warbaahinta. Waxaan u sheegay muhiimadda wadashaqeynta AMISOM iyo Wasaaradda Warfaafinta ee ku aadan sidii shacabka loo gaarsiin lahaa wararka dhabta ah iyo guulaha ay ciidamadu ka soo hoyaan kooxaha nabad-diidka ah iyo sida loogu baahan yahay in adeegyada bulshada loo gaarsiiyo goobaha laga xorreeyo kooxaha Al-Shabaab. Waxaan si gaar ah ula kulmay Taliyaha Guud ee Ciidanka Mareykanka ee Geeska Africa Major General Wayne W. Grigsby Jr iyo saraakiil ka socotay Wasaarada Arrimaha Dibedda ee Mareykanka iyo Safaarada Mareykanka ee Nairobi oo aan ka wada hadalnay sidii loo horumarin lahaa warbaahinta dalka, gaar ahaan sidii Radio Mogadishu loo gaarsiin lahaa deegaanada laga xoreeyey Al-Shabaab.”
Wasiirka Warfaafinta oo ugu danbeyntii ka hadlayey horumarka Xasilinta Dalka ayaa yiri “Hay’adaha Amniga ayaa in muddo ahba ku howlanaa howlgallo ay ka wadeen Muqdisho oo guryaha laga shakiyo la baarayey. Howlgaladan ayaa si xowli ah u socda isla markaasna lagu soo qabqabtay shaqsiyaad lagu tuhunsanaa inay abaabulayeen falal argagaxiso, isla markaasna guryaha qaarkood laga helay hub iyo waxyaalaha qarxa oo loo adeegsan rabay in shacabka Soomaaliyeed lagu laayo. Hay’adaha Amniga ayaa si gaar ah uga mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed ee sida hagar la’aanta ah ula shaqeeyey markii la baarayey guryahooda iyo kuwa warbixinnada muhiimka ah siiyey hay’adaha Amniga. Hay’adaha Amniga ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan sidii amniga loo sugi lahaa oo ay sheegeen in Amni la’aantiis aan horumar lagu tallaabsan karin oo amnigu uu yahay furaha nolosha.”